धनि बन्न के के गर्नु पर्छ ? - IAUA
धनि बन्न के के गर्नु पर्छ ?
ramkrishna October 25, 2017	धनि बन्न के के गर्नु पर्छ ?
आफूलाई शंका गर्न छाड्नूू
कुनै लक्ष्य नहुुनुु
तपाई आफ्नो काममा निरन्तर जोडिइरहनुुपर्छ । काममा जिद्धी ढंगले निरन्तर लागिरहनुुपर्छ । तपाई सफल बन्नका लागि लगातार काम गर्नुपर्छ र काममा फोकस भइराख्नुुपर्छ ।nayabato
Previous Previous post: तपाईं कहिल्यै विमान चढ्नु भएको छ? विमान भित्र के के समस्या आउछन
Next Next post: यसकारण बिहानै लामो सास लिनुहोस्